Ingxelo yakutshanje yeapile ithi ii-airpods 3 kunye ne-airpods pro 2 iza ngo-2021, ii-airpods x zinokubetha
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ingxelo yakutshanje ye-Apple ithi ii-AirPods 3 kunye ne-AirPods Pro 2 iza ngo-2021, ii-AirPods X zisenokuba zezokubetha
I-Apple ilungiselela ukuvuselela nokwandisa uluhlu lwayo oludumileyo lweearphones ezingasebenzi ngeengcingo kule minyaka izayo. Amarhe kunye neengxelo bezijikeleza ngoku kutshanje kwaye namhlanje uMing-Chi Kuo ucacisile izinto ezimbalwa.
Apple StudioPods ngaphezulu kweendlebe zeentloko
Umhlalutyi odumileyo akazange akhankanye ingxelo Kwinto ebizwa ngokuba yi-AirPods Lite ethe yahletywa kwezi ntsuku zisandula ukumiliselwa kwinyanga ezayo, kodwa waphinda waziphinda izicwangciso zokutyhila ii-headphone ezingaphezulu kwendlebe kungekudala.
U-Kuo ulindele ukuba imveliso entsha, enokuthi ibhalwe njenge-Apple StudioPods, ukungena kwimveliso yobuninzi ngelinye ixesha kweli hlobo. Oko kwenza isibhengezo kwi-WWDC ekuqaleni kukaJuni, njengoko bekuxelwe kwangaphambili nguJon Prosser, kunye nokukhululwa kwiinyanga ezininzi kamva kusenokwenzeka.
Njengoko kuchaziwe nguIBloombergKwiveki ephelileyo, uMing-Chi Kuo uthi ii-headphone ezizayo ezingaphezulu kwendlebe ziya kuba nezixhobo ezinamandla eziguqukayo. I-Apple iyaqondwa ukuba iphuhlisa ukwahluka kwe StudioPods- ipremiyamu kunye nokuqina - okuxhasa inkqubo yeApple-efana nokwenza ulwenziwo.
Ityala - I-Audiophile On Akukho lwazi lwamaxabiso lubonelelweyo namhlanje, kodwa iingxelo zangaphambili zikhombe kwi-tag yexabiso lama- $ 350. Oko kuyibeka i-StudioPods njengokhuphiswano ngqo kwii-headphone ze-Bose kunye ne-Sony ezingenazingcingo.
I-Apple AirPods X
U-Beats X Tipster uJon Prosser uthe kwinyanga ephelileyo u-Apple uphuhlisa ii-AirPods ezijolise kwimo yomzimba ebizwa ngokuba zii-AirPods X. Ezi kulindeleke ukuba zinikezele nge-AirPods Pro-njengokucinywa kwengxolo kuyilo lwe-Beats X, okuthetha ukuba kuyakubakho intambo yokudibanisa. phakathi kweendlebe.
Ixabiso le- $ 200 kunye nexesha lokumiliselwa kukaSeptemba / Okthobha lafakwa, kodwa uMing-Chi Kuo uvakalise ukuthandabuza malunga nokunyaniseka kwezi ngxelo. Uthi le mveliso, ekubhekiswa kuyo njenge- 'AirPods Pro Lite' kwingxelo yakhe, 'kungenzeka ukuba ibe' yi-Beats-branded.
Ukuba yinyani, oko kungacebisa ukuba iApple icwangcise enye indlela ye-premium kwi-Beats X yangoku ethengisa nge- $ 99 kuphela e-United States.
Ukuqhubela phambili kwi-2021, uMing-Chi Kuo ukholelwa ukuba u-Apple uza kuwukhaba unyaka ngokwazisa isibini sesithathu se-AirPods. Ii-AirPod ezikhoyo zaziswa ngo-Matshi 2019 kwaye kufanelekile ukuba zikulungele ukuphuculwa ngelo xesha.
Umhlalutyi ubona ukuveliswa kobunzima ukuqala kwesiqingatha sokuqala se-2021 kodwa akakholelwa ukuba kuya kubakho naluphi na utshintsho olukhulu kuyilo. Ii-AirPods 3 ngokucacileyo ziya kudibanisa uyilo lwe-AirPod esele ikhona kunye nenkqubo yokuhlaziya ehlaziyiweyo efana naleyo ye-AirPods Pro.
Nangona kungakhankanywanga, iApple iya kuthi izise uluhlu lokuphucula ukugcina abathengi benomdla. Eyona nto inokwenzeka kukuba yinto entsha yeaudio eyilelwe ukubuyisela i-Apple H1 eyaziswa nge-AirPods 2.
Iingxelo zangaphambili zityhile i-Apple ikwavavanya uluhlu lweempawu zezempilo zee-AirPod ngaphakathi. Nokuba ezi ziyenza ibe zii-AirPods 3 kuhlala kubonakala.
I-Apple AirPods Pro 2
I-AirPods Pro yafika ngo-Okthobha ophelileyo kuyilo olutsha endlebeni kunye nokucinywa kwengxolo; Iimpawu ezimbini ezingabonwanga kulungelelwaniso lwee-AirPod ngaphambili. Ngaphandle nje kweenyanga ezintandathu ubudala, nangona kunjalo, iApple sele icwangcisa isizukulwana sesibini.
U-Ming-Chi Kuo uthi kwinqaku lakhe lomtyali mali namhlanje ukuba imveliso ngobuninzi izakuqala ngasekupheleni kuka-2021 okanye ekuqaleni kuka-2022. Oko kuthetha ukuba isibhengezo sinokwenzeka emva kwexesha ngo-Okthobha u-2021, kwiminyaka emibini emva kokuvela kokuqala, okanye mhlawumbi kumsitho wonyaka ka-Matshi 2022.
Akukho lizwi lokuba loluphi utshintsho olucwangcisiweyo, kodwa naluphi na uhlaziyo lwetshipsi luya kujongwa kwangaphambili kwii-AirPods zohlobo lwesithathu ezichazwe apha ngasentla.
gcina ibhetri kwi-iphone 12
Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu ye-sprint ka-2016
Uluhlu lwamahemuhemu ashushu zeziphi iimodeli ze-iPhone ezingazukufumana i-iOS 15
Izithuba ze-T-Mobile ezimnandi ngomhla we-4 kaJulayi wokunyusa ukuthengisa kunye nezaphulelo kwi-S7 / kumda, kwi-iPad nakwabanye
I-iPhone 11 (2019): umhla wokukhutshwa, ixabiso, iindaba kunye nokuvuza
Abathengi abatsha nabakhoyo beT-Mobile bakwenye into emangalisayo ngoku
I-Apple Bukela ukulandela umkhondo wokulala ulapha! Le yindlela esebenza ngayo
I-Samsung Galaxy Qaphela i-7 vs Apple iPhone 6s Plus
Eyona ndlela ifanelekileyo yokufota neGoogle
Ezona ndlebe zintambo zintle ze-iPhone (ngesinxibelelanisi sombane)